नेपालमा आज एकै दिन २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ? — Sanchar Kendra
१यस वर्षको ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’को उपाधि नम्रता श्रेष्ठलाई
२शारीरिक सम्बन्ध राख्ने क्रममा महिलालाई किन हुन्छ पीडा ? यस्तो छ खास कारण
३प्रचण्डले ‘बल’ प्रयोग गरेको भन्दै ओली तनावमा, के हाे यथार्थ ?
४बेलायतपछि यो देशले पनि दियो विश्वलाई यस्तो खुसीको खबर
५२५ दिनसम्म बोलचाल बन्द भएका ओली-प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता, के भयो सहमति ?
६देशभर आईसीयू र भेन्टिलेटरमा कति कोरोना संक्रमितको हुँदैछ उपचार ?
७पछिल्लो २४ घण्टामा थप १०२४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि
८सकियो नेकपा हाइकमाण्ड बैठक, के भयो निर्णय ?
९नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउदै ओली सरकार, पहिलो चरणमा क-कसले लगाउन पाउछन ?
१०नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी, ओली सहभागी छन् कि छैनन् ?
११कोरोना अस्पतालको आईसीयूबाटै सुनका गहना गायब, ररहस्य थाहा पाएर डाक्टर समेत हैरान
१२अमेरिकी गुप्तर प्रमुखले चीनलाई लगाए यस्तो गम्भीर आरोप
नेपालमा आज एकै दिन २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ?
काठमाडौं । नेपालमा आज साेमबार एकैदिन २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कपिलवस्तुमा ६, रुपन्देहीमा ६ र बर्दियामा १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि एकैदिन संक्रितकाे संख्या २४ पुगेकाे हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी अनुसार आजै विहानमात्रै कपिलवस्तुका १० र सप्तरीका १ जना गरी ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीका अनुसार संक्रमितहरु कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका- ८ र बुद्धभूमि नगरपालिका-७ का का १५, १९, २३, ३०, ३२ र ३८ वर्षका पुरुष छन् । सोमबार बिहानमात्रै संक्रमण पुष्टि भएका १० जना पनि बुद्धभूमि र लुम्बिनी सांस्कृतिककै हुन् ।
यस्तै रुपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिका-७ र लुम्बिनी सांस्कृतिक गाउँपालिका- ६ का २४, २६, २७, ३०, ३२ र ४० वर्षीय पुरुषहरु छन् भने बर्दिया राजापुर- निवासी ११ वर्षीया महिला छन् । उनीहरुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले जानकारी दिए । शनिबार मात्रै सरकारले लकडाउन केहि खुकुलो पारेको थियो ।
हालसम्म उदयपुरमा ३२, पर्सामा २५, बाँकेमा २४, कपिलवस्तुमा २१, रुपन्देहीमा ७, काठमाडौंमा ५, कैलालीमा ४, रौतहटमा ३ तथा बागलुङ, बारा, चितवन र झापामा २/२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यस्तै भोजपुर, सर्लाही, सप्तरी, बर्दिया र कञ्चनपुरमा एक/एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ३३ जना निको भएका छन् । तर, नारायणी अस्पताल वीरगन्जबाट कोभिड–१९ निको भएर गएका दुई जनामा पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई थप परीक्षणका लागि अस्पतालमा पुन: भर्ना गरिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने ५२ वर्षीय ती व्यक्तिको पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ । पाटन अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका उनलाई पनि पुन: अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
कपिलवस्तुमा सोमबार फेला परेका १० जना कोरोना संक्रमित एक साताअघि भारतको मुम्बई र पन्जाबबाट नेपाल आएको खुलेको छ । लकडाउनकै बीचमा उनीहरु सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर लुकिछिपी दशगजा क्षेत्रबाट कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका-५ र बुद्धभूमि नगरपालिकामा छिरेका हुन् ।
भारतका विभिन्न शहरबाट आएर कपिलवस्तुका विभिन्न नाकामा अहिले पनि एक हजार बढीको संख्यामा नेपालीहरु बसिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय रातिको बेला सुरक्षाकर्मीलाई छलेर जिल्ला प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु बढ्दै गएपछि कपिलवस्तु जिल्लालाई सिल गर्ने निर्णय भएको छ । सोमबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सोमबार नै साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी जेठ ५ गतेसम्मका लागि सिल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) दीर्घनारायण पौडेलले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी जेठ ५ गतेसम्मका लागि जिल्ला सिल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘भाइरस (कोरोना भाइरस)को संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर हामीले सम्पूर्ण जिल्ला सिल गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ सीडीओ पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनबाहेक सबै प्रकारका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । सर्वसाधारणलाई पनि घर बाहिन ननिस्किन भनिएको छ ।’
सीडीओ पौडेलले औषधि, खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल, पशुको दाना बोक्ने तथा एम्बुलेन्स र शव वाहानजस्ता सवारी साधनमात्रै चल्न दिइने जानकारी दिए । अन्य प्रकारका सवारी साधनहरु चलाएको पाइए नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सर्वसाधारणले अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्किनु परे नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरीको हटलाइन नम्बर (१००)मा फोन गरेर बाहिर निस्किनका लागि अनुमति लिन सक्नेछन् । अनुमति नलिइ बाहिर निस्किएको पाइए सर्वसाधारणलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाइने पौडेलले जानकारी दिए ।